PowerPoint 2019 सुझावहरू: डिजाईन वर्कबुक
द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | जनवरी 5, 2021 | वेबमा
तपाईंको दर्शकहरूको दिमागमा स्थायी प्रभाव पार्नु। एउटा उत्तम तरिका भनेको उनलाई s० दशकको स्लाइडको उत्तराधिकारमा सुत्न नदिनु हो। यस भिडियोमा लेखकले प्रभावकारी नतिजा भन्दा कसरी अझ बढी प्राप्त गर्ने भनेर देखाउँछन्। पावरपोइन्ट २०१ 80 मा केहि आधारभूत कुराहरू समीक्षा गरियो। निस्सन्देह तपाईलाई सामग्री र फारमको स्वामीत्व गर्ने व्यक्तिको रूपमा हेर्न अनुमति दिइनेछ।
PowerPoint 2019 सुझावहरू: डिजाईन वर्कबुक जनवरी 5th, 2021Tranquillus
रिड के तपाईंले निष्क्रियताको अवधिमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने बारेमा सोच्नुभयो?
अघिल्लोराज्यको साथसाथै व्यावसायिक निर्माण महासंघ निर्माण क्षेत्रमा क्रियाकलाप, रोजगारी र व्यावसायिक प्रशिक्षणको पुनः सुरु गर्न प्रोत्साहित गर्न प्रतिबद्ध छन्।
निम्नExcel २०१० मा कस्टम सूची
बाल हेरचाह समाधानहरू प्रस्ताव गरेर व्यावसायिक एकीकरणलाई बढावा दिनुहोस् र प्रारम्भिक बाल्यकाल क्षेत्रमा भर्ती तनाव कम गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
IUT प्रविष्ट गर्दै: तपाईंको फाइललाई बढावा दिनको लागि कोडहरू
फ्रान्सेली भाषामा आफूलाई अभिव्यक्त गर्नुहोस् (स्कूलको सेटिंगमा)।
फेब्रुअरी २,, २०२१ कसरी प्रशिक्षणमा सामाजिक संवाद व्यवस्थित गर्ने? व्यावसायिक प्रशिक्षणको सर्तमा, रोजगारदाताहरू कानुनी रूपमा धेरै जिम्मेवारीहरू पालना गर्न बाध्य छन्।